[Ankapobeny ] 06 Febroary, 2009 09:45
Rossy Mazava ny atondihiny
Mody tsy manao politika izy kanefa dia miray petsapetsa @ mpanao politika h@ izay. Saika olomanga ny gasikara mihitsy kanefa noho ny fidirany @ resaka politika voretra dia lasa io olom-bomanga io ny niafarany. Tsy maintsy tonga eto antananarivo hono izy hirahira etsy @ 13 mai sambany kosa izy no lasa mihira eo @ 13 mai io izay lazainy oe faritra mena t@ izy mbola nahazo ranondranony tao @ Radidy. Toro hevitra ny ahy tsy aleo ve mijanona mpanakanto toy izay mandoto tena @ ze politika e. Mba bandy mahay mamoron-kira ihany!!
(Izy no Rossy milaza ho irery any antanin'olona kay tena be akama tokoa any)
Misy azy indray izany ireo jomaka sy bemiranga rahampitso fa hampanaovina asa maloto @ fanankorotanana. Mahantra rahateo ka sitrany ahay mba misy dimy arivo kely hividianana vary 4 kilao aloha. Mazava ho azy fa tsy maintsy hisy zava-doza ketrehana ao rahampitso. Dia avy eo indray hiteny ny mpitarika oe tsy tompon'andraikitra @ hatezeram-bahoaka. Ilay vahoaka no anilihina ny andraikitra rehefa misy ny fihoaram-pefy sy maty @ sorona. Tsy mendrika kosa raha izany toetra fetsifetsy izany no hakana ny fahefana.
(ireto ny mpanao gazety ao @ radio Antsiva)
Tondro molotra fontsiny mantsy izao dia maharava trano sy voaroba ka ilaina mailo tsara mihitsy ny miresaka @ olona. Tsy mety rahateo ny fomba ataon'ny radio viva sy ny antsiva izay milaza mivantana ny laharan'ny ny fiara sy ny toerana misy ilay olona ary lazaina ampahibemaso oe fahavalontsika sy tsy namantsika. Izany ve no atao nefa mba mieritreritra ny hitondra firenena ianao. Maniraka ny mpanaradia anao hamono sy handroba ny olona tsy miovy hevitra @nao. Tokony mba hieritreritra ihany lahy fa tsy izao ihany anie no iainana eto Madagasikara e.
"Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina!!!". Mba meteza kely fotsiny eo @ toeran'ireo voaromba ireo mpanao gazety manondro molotra ireo mba manana vady aman-janaka ihany. Ovay ihany koa ny fomba fanao fa mbola tsy tara. Tao aorinan'ny 17 janoary no nankaty izao dia maro ireo olona voaroba. I Moxe Ramandimbilahatra, nanaraka azy omaly i Eugène Randriamiandrisoa teo koa i Saholimalala izay mpanolotsainam-paritra ny antoko Tim dia farany izay natao antsoantso omaly t@ radio viva dia i Jaquot ny tarika Green. Lazaina fa fahavalom-bahoaka daholo ireo olona ireo dia robaina ny fananany.
(vahoaka madinika tsy maneho hevitra)
Marina ihany koa fa misy ireo "olona mangina tsy maneho hevitra" izay maro an'isa lavitra noho izy roa tonta mifampiantsy @ izao dia atao ahoana ny hevitr'izireo? 50% ny malagasy no nifidy an'i Ra8 ho filoha ny repoblika ary 63% ny olona teto Antananarivo @ mpifidy 44% tonga nifidy no nifidy an'i Andry Rajoelina izany oe ampaham-bato ihany izany no tena azony fa tsy izy manontolo akory. Ny ambony tsy naneho hevitra izay maro an'isa lavitra dia atao tsinotsinona ankehitriny.Te hiasa ampilaminana ireo te hianatra ny zanak'izireo tsy tia resaka politika izireo kanefa dia tsy misy mihaino ny feony satria olona tsy tia tabataba sy miady ry zareo. ny fahendrena malagasy anefa dia milaza fa "Izay mangina volamena".